Global Voices teny Malagasy » Videon’ny Hollaback! Maharitra Ora 10 : Izao Ve no Hamaritana Ny hoe Fanorisorenana? · Global Voices teny Malagasy » Print
Videon'ny Hollaback! Maharitra Ora 10 : Izao Ve no Hamaritana Ny hoe Fanorisorenana?
Voadika ny 22 Novambra 2014 9:33 GMT 1	 · Mpanoratra Natalia Safonova Nandika (en) i Natalia Safonova, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Etazonia, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta
“10 Hours of Walking in NYC as a Woman,” [Vehivavy mandeha an-tongotra ora folo ao an-tanànan'i New York] pikantsary YouTube.
Raha zatra ny misera aterineto ianao dia mety efa nahita ilay lahatsary nalaza haingana hoe “10 Hours of Walking in NYC as a Woman” [Vehivavy mandeha an-tongotra ora folo ao an-tanànan'i New York]. Ilay rakitsary izay asa vitan'ny Hollaback!, hetsika iray manohitra ny fanorisorenana an-dalambe, manasongadina vehivavy tanora iray mivezivezy amin'ny lalan'i New York City, izay nahangona antso fikaotikaotiana sy izao karazana fifantohana tsy notadiavina rehetra izao mihoatra ny 100 tao anatin'ny iray andro. Azon'ny lahatsary ny zavamisy mahazatra mahazo ny vehivavy manerantany. Tratran'ny siotsioka, antso fikaotiana ary fanarahan'ny zatovolahy iray azy mangina mihitsy aza ilay vehivavy ao anatin'ny horonantsary.
Mafana tokoa ny adihevitra tamin'ny video -n'ny Hollaback! Maro tamin'ireo olona nanoratra tao amin'ny YouTube (hita fa lehilahy ny ankamaroany) no tsy nanaiky ny fanazavan'ny lahatsary ho fanorisorenana. Ho an'ny ankamaroan'ireo olona ireo, ny ankamaroan'ny fikaotikaotiana hita ao amin'ny lahatsary dia fandokandokafana tsotra.
Ka… dia izay izany? roa minitra amin'ny ora folo noraketina an-tsary ary ny ratsy indrindra azonao dia tovolahy iray miezaka ny hahazo ny laharan'ny findainao sy “fandokandokafana roa tsy notadiavinao”
Lasa lavidavotra kokoa i Jorge Gonzales :
Heloka bevavam-pankahalàna ny feminisma. Izany no mahatonga ny kaondrana hanao zavatra vendrana tahaka ity lahatsary ity.
Darryl Wayne te-hampidi-dresaka fa mampanahy be tokoa ny mamelabelatra ny fihetsika ao amin'ny lahatsary hita ao amin'ny video ho fanorisorenana :
Fa inona no andehanany an-tongotra mandritra ny ora 10 ary aiza izany trangam-panorisorenana mihoatra ny 100 resahin-dry zareo izany? Tsy fanorisorenana kosa ny pi-maso sy ny sioka.
Ho an'ireo izay manaiky fa ao anatin'ny fanorisorenana ny antso fikaotiana, dia fotoana fanararaotra ny lahatsarin'ny Hollaback! hizaran-dry zareo ny zava-niainan'izy ireo manokana sy ny tahotra mahazo azy ireo rehefa mandeha irery eny an-dalambe.
Ohatra amin'izany i NicFem 24 :
Eo imason'ny olona sasany dia mety hoe fandokafana vehivavy izany, saingy hoan'ny ankamaroan'ny vehviavy efa niaina izany dia tena manahirana dia manahirana tokoa izany, indrindra rehefa misy olona manapa-kevitra hoe mety ny manondro ny feny na ny nonony.
Saripikan'i Flick Michael. Creative Commons (CC BY 2.0)
Tsy ny mahavavy na ny mahalahy ilay olonaihany no resaka saropady amin'ilay horonantsarimihetsika. Misy ireo mpanao gazety sy mpikatroka nanasongadina  fa ny ankamaroan'ireo lehilahy voatondrotondro ao amin'ny lahatsary manorisory vehivavy dia mainty hoditra na Latino, izay miteraka fanahiana indray amin'ny resaka fanavakavaham-bolonkoditra. Ho setrin'izany ny Hollaback! nilaza ny “fialantsininy amin'ny fitongilanana ara-poko tsy niniana tamin'ny famokarana ilay lahatsary izay nampiseho betsaka kokoa ireo lehilahy mainty,” ary nampanantena fa hanitsy ny fahadisoana amin'ny fanatontosana ny tetikasa manaraka.
Miteraka adihevitra hatrany ny resaka miralenta—indrindra fa amin'ny video lasa malaza an-tserasera izay nahazo fanehoan-kevitra mihoatra ny 137.000. Fahombiazana goavana tokoa ny lahatsarin'ny Hollaback! “10 Hours of Walking” [Ora folo nandehandehanana]. Tamin'ny fanorisorenana voaray tao anatin'ny horonantsarimihetsika kosa, dia vasoka ilay rakitsary manoloana ireo fanehoan-kevitra manimbazimba ny vehivavy hita eo ambanin'ny lahatsary YouTube amin'izao fotoana izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/11/22/65930/